Taona litorjika A – Trinitera Malagasy
Manomboka ny Taona litorjika vaovao ny Eglizy. Tsara ho fantatra ihany araka izay ny drafitra ankapoben’ireo taona litorjika ireo sy ny evanjely vakiana :
Ny Taona A dia Fandalinana ny Batemy: antsoina handalina ny firosoantsika ho Kristianina isika araka ireo loha-kevitra sy Evanjely mifanaraka amin’ny fivoaran’ny maha-kristianina, araka ny drafitra katekomenaly, sy ny fiombonana ao amin’ny Eglizy. I Md Matio moa no Evanjely vakiana amin’izany.
Ny Taona B dia Fandalinana ny Fifandraisana amin’ny Misterin’i Kristy nitsanga-ko Velona. Antsoina handinika ny misterin’ny fahafatesana sy ny fitsanganan’i Kristy ho velona isika mba hiombonantsika aina Aminy bebe kokoa. Izany fandalinana ny fiainan’i Kristy izany dia miampy ny fampianaran’i Joany voavelabelatra bebe kokoa. I Md Marka sy ny ampahany maro amin’ny Evanjely Nonsoratan’i Md Joany no vakiana amin’izany.
Ny Taona D dia fiantsoana amin’ny fivalozana satria matoky ny Famindram-pon’Andriamanitra. Voantso hizotra ny lalam-pivalozana isika, izay hany hahatsapantsika ny halalin’y Misterin’ny Paka, fara-tampon’ny Fiombonana amin’ny Ray. Ny fandalinana manokana ny famindram-pon’Andriamanitra sy ny hafaliana vokatry ny fibebahana araka ny Evanjelin’i Md Lioka Lioka no imasoana amin’izany.
Telo taona hiezahana handalinana ny finoana sy hamakiana ny tenin’Andriamanitra eo am-pandinihana ny Misterin’ilay Kristy, ilay Teny tonga nofo.
Amin’ny Taona A ity, dia ny Evanjely araka ny nosoratan’i Matio no entintsika mandalina ny Batemy noraisintsika, entina mandalina ny maha-kristianina antsika. Raha lazaina ambangovangony ny momba ny Evanjely nosoratan’i Matio dia mifototra amin’ny hevi-dehibe roa: Ny Fanjakan’Andriamanitra sy ny Eglizy.
Ny Eglizy naorin’i Jesoa araka an’i Matio, dia tokony haneho sahady izay tokony ho fiainana rahatrizay any amin’ny Fanjakan’ny lanitra, ary lalana hahafahan’ny olona mihazo ny lanitra.
I Matio ihany no ahitana ny teny hoe : Eglizy : Ianao no Piera ary eo ambonin’izany Vatolampy izany no hanorenako ny Egliziko (Mt 16, 18); Raha tsy mhaino azy ireo izy dia ambarao amin’ny Fiangonana; ary raha tsy mihaino ny Fiangonana dia ataovy tahaka ny jentily sy ny poblikana (Mt 18, 17).
Tsy azo adinoina ny tenin’i Jesoa namaranan’i Mateo ny Evanjely : ”Indro aho eo aminareo mandrakariva mandrapahatongan’ny faran’izao tontolo izao” (Mt 28, 20) izay manamarika ny toe-tsaina hoentintsika mamaky ny zava-mitranga araka ny Finoana. Tenin’ny Finoana izany. Ny Taratasy Ansiklika Spe salvi, Ny fanantenana no nahavonjy antsika (Rm 8, 24) nosoratan’ny Papa Benoit XVI dia manamafy izany. Tsy dia hanantena zavatra akory isika fa kosa hanantena ilay Kristy izay niantso antsika sy eo anivontsika mandrakariva, ary tsy afa-misaraka hoy ny Papa ny finoana marina sy ny fanantenana tsy mihozohozo…
Tsy tokony ho revon’ny ambanimaso fa aoka ho avo fijery! Araka ny lohahevitra aroso amin’ity alahady voalohan’ny Fiaviana ity
 Araka ny Fampidirana ao amin’ny BJ italiana sy ny nataon’i Jean-Pierre Bagot ao amin’ny Missale festivo Emmaus (azo jerena koa ny boky i quattro vangeli, ISg edizione 1998, 2° éd, nosoratan’i Bruno Maggioni) dia misy hevi-dehibe maromaro (samy fito izy ireo saingy tsy mitovy ny fitsinjarany) asongadin’ireo toko 28 ao amin’ny Evanjely nosoratan’i Matio : 1- I Jesoa, ilay Mesia nandrasan’Israely : ny razam-beny sy ny fahaterahany ary ny fahazazany (toko 1-2); 2- I Kristy no ilay Moizy vaovao, manambara amintsika momba ny Fanjakan’Andriamanitra sy ny iraka nahatongavany (toko 3-7) [Batemy- Fifadian-kanina sy fakampanahy – fiantsoana ny apostoly – ny Hasambarana – ny vavaka sy ny fifadian.kanina – ny Lalàna sy ny Mpaminany]; 3- Ambaran’i Jesoa antsika fa efa eo anivontsika ny Fanjakan’Andriamanitra (famantarana sy fahagagana momba azy) ary voaantso isika handray anjara amin’ny fanorenana izany Fanjakan’ny lanitra izany (toko 8-10); 4- Tsy zavatra mandeha ho azy anefa izany asa fanirahana izany fa mety hisedra ny mafy, hany ka mila la atao mafy orina ny safidy (Toko 11-13) [ny Fanoharana – ny amin’ny Fanjakan’ny Lanitra : safidy hahafoy izay rehetra hananana]; 5- Izay te hanaraka an’i Jesoa dia tsy hatahotra ny hijoro ho vavolombelony ary hanovo hery mandrakariva amin’ny fiarahana aminy (toko 14-18) [i Joany Batista nanambara ny marina, i Piera nandeha ambony rano, ny fohovana tarehy…]; 6- Ireo manaiky ho Mpiananatr’i Jesoa (Fiangonana) dia hanaraka ireo fitsipi-pitondrantena nosoritany, ho toy ny fisantarana sahady ny fiainan’ny lanitra (toko 18-25) [ny Fanetrentena – ny fifamelana – ny fanambadiana sy ny eonoka noho ny fanjakana – ny tanimboaloboka – ny fanasana ho any amin’ny fanjakana – ny fitsanganan’ny maty – ny didy lehibe – ny faharavan’izay hianteherantsika – ny virjiny hendry sy adala – ny fitsarana farany]; 7- Ny fijaliana sy ny fitsanganana ho velona (toko 26-28).